मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यस्तो छ बैंकर ज्ञवालीको विश्लेषण
बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीतिको समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंक ले आज जारी गरेको छ। यसका मुख्य ९ व्यवस्था निम्नानुसार छन।
१.मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।
असर: अनिवार्य नगद अनुपात- ३%, बैंक दर-५% र वैधानिक तरलता अनुपात -८,९ र १०% यथावत रहदा तरलताको स्थिति मा कुनै असर नपर्ने।
असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहे को छ। यो भने को सिमा भन्दा रु.१५ अरब बढि छ। बैंक हरू कर्जा दिन सक्ने स्थिति मा छैनन। गणना विधि यथावत राखिएको कारण कर्जा दिन सक्ने छैन। निक्षेप बृद्धिदर १७.२% र कर्जा बृद्धिदर ३१.७% रह्यो। संचालक समिति बाटै पारित गराई हामी ९० % तल राख्छौ भनेर प्रतिवद्धता पेश गर्नु पर्ने हुदा नियामक अझै कडा रुपमा प्रस्तुत।
असर: बढ्दो आयात को कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिघट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुबैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ। महंगो अनी विलासिताका सामानहरु र सिधै भारत तर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सुची सहित केहि नियन्त्रण गरिने अपेक्षा।
असर: सुनचादीको आयात घट्ने।
७.गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
असर: गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने।
असर: विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुँजीको ३०% मा पुनरावलोकन । यसले तरलतामा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारको रकममा तलमाथि हुने देखिन्छ।
९. DAP र DAA को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असर:विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १,००,००० पुनरावलोकन गरिनेछ आयात नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ। यस बाट विदेशी मुद्रा को खर्च केहि कम हुन जानेछ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिले आयात लाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्धन को निती लिएको छ। यसबाहेक अरू कुरा हरु यथावत।
(ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।)
रामबहादुर थापाको स्वागत मन्तव्य- प्रतिगामीको गुरुयोजनामा नेकपालाई तीन टुक्रा बनाइयो